Jera no nanatrika soa aman-tsara ao amin'ny PT / Expo 2017 CHINA any Beijing, Sina.
Jera manana soa aman-tsara ny ttended amin'ny PT / Expo 2017 CHINE izay nitranga faha 27-30 Septambra 2017 any Beijing, Sina.
Misaotra anareo rehetra noho ny mitsidika ny trano rantsan-kazo
Jera manana soa aman-tsara ny ttended amin'ny PT / Expo 2017 CHINE izay nitranga faha 27-30 Septambra 2017 any Beijing, Sina. Misaotra anareo rehetra noho ny mitsidika ny trano rantsan-kazo
Location ny fampirantiana afovoany: Ny fivoriambe National Center ao Beijing. Booth: Hall F5, trano rantsankazon'i 5618. Website ny Fampirantiana.
Ny foto-kevitra dia mahazatra ny fampirantiana ny vokatra sy ny vokarina manolotra izahay
FTTH Fibre optic tariby fitaovana, fa fanorenana ny fifandraisan-davitra harato sy aterineto.
Toy izany us:
Fibre optic splice fanidiana (FOSC)
Fibre optic famaranana vata (FODB)
FTTH mitete tariby clamps sy Fittings
Preformed tsipika vokatra sy ny fitaovana,
Stainless vy ny miaramila iray toko sy ny Accessories bao.
Faly izahay mpanjifa vaovao avy: Sina, Azia Atsimo, Amerika Atsimo sy Eoropa. Fisaorana noho ny ho avy. Antenaiko afaka nanorina fifandraisana maharitra amin'ny fanatitra matoky kalitao ho an'ny mpiara-miasa.
Raha manana fanontaniana - aza misalasala mba hifandray antsika.
Post fotoana: Oct-18-2017